Mambokadzi Mubhedha Furu Yakakwidziridzwa Headboard
Baotian 35 makore anotarisa pane fanicha fanicha
Mambokadzi mubhedha furemu yakasimudzwa musoro
Rima Grey Kudya Sachigaro
Mucheka wepepuru sofa
Sofa yeChesterfield ine chaise
Yakashongedzwa yepepuru yemazuva ano chaise lounge sofa
Chitubu Uye Ndangariro Foam Mbeu dzakauchikwa Matiresi
Midziyo yekurara nhema nhema ganda rekuchengetedza mubhedha
American Style Kugara Kamuri Fenicha Luxury Design Fabric Corner Sofa, Chesterfield Dhiza Fabric Couch
Imba Imba Yemazuva Ano 3 seater jira pasofa mubhedha
Fenicha yehotera muhomwe chitubu chemasaini sofa
Baotian fanicha Co, Ltd.
No.3 Chengcai Road, Guta Guru, Shunde Disttrict, Foshan Guta, Guangdong. China
Kutarisana nenhamba yakakura kudaro uye inooneka yemidziyo, zvakawanda zvekufunga zvinofanirwa kutorwa. Zvirokwazvo, yemapuranga emubhedha, mhando dzacho dzakawanda semibhedha kubva pahukuru kusvika pane izvo zvinhu. Saka, kana iwe uchinzwa kuzengurira kana zvakakuomera kuti usarudze kuti ndeipi inofanira kuve yekutanga sarudzo sei, zvakadii nezvekudzidza iyi mambokadzi mubhedha furemu yakasimudzwa musoro?
Tumira email kwatiri BATA PANO
Kazhinji, izvo isu zvatinotora nguva kufunga nezvazvo ndeyokuwana chaiyo uye yakanaka metiresi. Zvisinei, chero munhu akatenga furemu yemubhedha anobvumirana nekukosha kwayo iyo inowanzo kutora nesimba rakawandisa. Kutarisana nenhamba yakakura kudaro uye inooneka yemidziyo, zvakawanda zvekufunga zvinofanirwa kutorwa. Zvirokwazvo, yemapuranga emubhedha, mhando dzacho dzakawanda semibhedha kubva pahukuru kusvika pane izvo zvinhu. Saka, kana iwe uchinzwa kuzengurira kana zvakakuomera kuti usarudze kuti ndeipi inofanira kuve yekutanga sarudzo sei, zvakadii nezvekudzidza iyi mambokadzi mubhedha furemu yakasimudzwa musoro?
Iyo mambokadzi mubhedha furemu yakasimudzwa musoro bhodhi ndiyo yakakwana chirevo chidimbu chekuiswa pane chero yekurara ine akasiyana masitaera. Iyo grey yakanakisa yakakwenenzverwa kupera uye dhizaini dhizaini inoita kuti iite seyakanaka uye inodzivirira. Yakakwenenzverwa njanji mativi inogadzira yakashongedzwa uye inoratidzika kutaridzika iyo yakanyatso kukwana neiyo yakasarudzika square yakakwiridzirwa yakasimudzwa bhodhi. Row skeleton inotsigira zvizere mateti yako. Mapuranga akapoteredzwa anogona kugadzira maturu pachigadziko. Yakasimba uye yakasarudzika yemubhedha makumbo inogadzira dhizaini yekutaridzika kwakaringana kunoenderana nemitaira yakawanda uye zvido. Zvese zvaunoda kuti nekukurumidza uye nyore kuisa ino mubhedha furemu inosanganisirwa muchikamu. Ngarava dzinokurumidza uye dzakaputirwa zvakanaka mubhokisi rimwe, kurudyi kune yako imba yekuchengetera.
Type: Fenicha yekumba, Chivako
Chinyorwa: Mucheka; Simbi;
Chitarisiko: Midziyo Yemazuva Ano
Nzvimbo yeMabviro: Guangdong, China
Chigadzirwa zita: Mambokadzi mubhedha furemu yakasimudzwa musoro
Model Nhamba: BF-AU01-04
Kavha Yenyaya: Mucheka
Basa: Kudya pamubhedha
Dimension(cm): 137L * 190W
Kuisa pack(cm): 139L * 192W
Nguva yekugadzira: 30-45mazuva
Mitemo Yekutengesa: FOB
Kubhadhara Nguva: T / T, 35% dhipoziti, zviyero usati waendesa
Kurongedza: Yakawedzera Yakasimba Kupakata
Waranti: 2 makore waranti yemukati chimiro, 1 gore reaniline uye yepamusoro zviyo ganda
Chitupa: ISO9001; SGS;
1~ 3: EPE kuputira yakakomberedza sofa
4~ 6: Foam corrugated kadhibhodi kuputira nekona
7~ 8: Carton bepa rinoputira rakatenderedza sofa, kusanganisira nechepazasi
9~ 12: Yokunze layer neisina-yakarukwa.
Q: Iwe uri mugadziri kana kambani yekutengesa?
A: Isu tiri chigadzirwa chekugadzira zvigadzirwa zve upholstery kubvira 1985.
Q: Fekitori yako iripi??
A: Isu tiri muShunde, Foshan Guta, Guangdong Province, China
Q: Ndeipi yako yemberi-yekutengesa sevhisi?
A: Tine imwe pane imwe mushure-yekutengesa yekutevera. Kana paine kukuvara kubva kune chekufambisa kana mhando nyaya, isu tichaona mhinduro uye ndokupa iwe mhinduro.
Q: Chii chinonzi MOQ yako?
A: Yedu MOQ ndeye 40HQ kana 20GP(Mari yekuwedzera inogona kushanda), unogona kusanganisa chigadzirwa chakasiyana kusanganisa 40HQ kana 20GP.
Q: Inogona here chigadzirwa chako kupasa muedzo weiyo hotera zvirongwa?
A: Isu tine ruzivo rwakapfuma rwemapurojekiti ehotera uye zvese zvinhu zvinokwanisa kupasa moto-kuramba senge CA117, BS5852, BS7177, BS7176, uye E0 / E1.
Q: Ndeipi basa rako guru pane zvigadzirwa?
A: Isu tiri kunyanya kugadzira Sofas, Sofabed, Matress, Recliners, uye Chairs.
Q: Ndingasarudze iro ruvara here??
A: Hongu, isu tine akawanda mavara kusarudza kubva mune zvakasiyana zvinhu zvakaita seTop yezviyo yeganda, PVC, UNOGONA, kana machira.
Q: Ndeipi nguva yekutumira?
A: Tichingogamuchira iyo dhipoziti, zvinogona kutora mazuva makumi matatu nemakumi matatu nemashanu.
Q: Ndeapi mazwi ekubhadhara?
A: Iyo yekubhadhara mazwi ichave FOB kune SHENZHEN port. T / T, 35% dhipoziti, zviyero usati waendesa.
Q: Iwe une stock yezvigadzirwa?
A: Aihwa, isu tiri OEM uye ODM inogadzira, zvese zvigadzirwa zvakagadzirirwa vatengi vedu.
Q: Iyo fekitori inogona kugovera muyenzaniso?
A: Tinogona kutumira jira kana cheganda sampuro zvakananga kwauri. Chigadzirwa cheODM chinofanira kubhadhariswa muyero wekuenzanisira mushure 10 ma pcs kuodha anodzosa sampuro mubhadharo.
Q: Ndeipi waranti ye polity yezvigadzirwa zvako?
A: Garandi yemasofa ndeye 2 makore ezvakaumbwa zvemukati, 1 gore reganda rekunze; Matress ndeye 10 makore echimiro chemukati.
Idiki Imba Pfungwa Mazano Space Kuchengetedza
Zvekubvunza nezvezvigadzirwa zvedu kana pricelist,
ndapota siyai email yako kwatiri uye isu tichava mukati
kubata mukati 24 maawa.
Baotian fanicha Co, Ltd. © 2020 ZVESE ZVESE ZVAKAITWA Yakavanzika PolicyDzorera PolicyShipping Policy
wechat QR kodhi x Pedyo